Pakistaney, syrianina,… ? : teratany vahiny mampiahiahy | NewsMada
Pakistaney, syrianina,… ? : teratany vahiny mampiahiahy
Ankoatra ny teratany afrikanina, miha-maro hita mandehandeha eto an-drenivohitra, manao ”bizna” eny rehetra teratany vahiny, tsy fantatra na pakistaney, na syrianina, na inona. Iza marina ary hanao inona eto? Mampiahiahy ny maro.
Tazana amin’ny faritra maromaro eto an-dRenivohitra toy ny eny Analakely, Esplanade, Anosy, Ampefiloha ny teratany vahiny milaza fa Pakistaney mivarotra finday amin’ny mpandalo. Manatona avy hatrany izy ireo ary mampiseho finday avo lenta toy ny Samsung 7 na Iphone 7 amidiny manodidina ny 1 tapitrisa Ar eo. Miteny anglisy mifangaro eo ireo olona ireo, izay mandeha tsirairay fa tsy miaraka.
Maromaro ny efa sendra azy ireo, ary misy ny matahotahotra amin’ny fihetsiny somary kaodikaody. Hatramin’ireo mpiserasera anaty tambajotra ara-tsosialy aza, nahazo azy ireo ary nanaparitaka izany. Lehilahy iray manao akanjo rebareba miloko volom-parasy no efa azo sary ary nisy nanaparitaka tanaty tambajotra sosialy.
Nisy ihany koa ireo azo sary nilanja entana mandehandeha toy ireny mifindra monina ireny. Eo indrindra ny mahatonga ny olona mametra-panontaniana momba azy ireo. Mpifindra monina sa ireo Karana eto an-tanàna ihany ireto mandehandeha hafahafa ireto. Mahazatra ny olona hatramin’izay mantsy ny fahitana teratany vahiny manan-karena sy mandeha fiara tsarabe, tahaka ireny teny Analamahitsy Ambatobe nisy nitifitra ireny.
Manampy trotraka ny fisian’ny resabe teo aloha teo momba ireo mpitsoa-ponenana syrianina izay hoe hanamboarana trano eny Ambohimangakely. Niteraka fanehoan-kevitra maro teto amintsika ny momba izany ary efa nivoaka an-gazety mihitsy. Namaly ny fanjakana avy eo nilaza fa tsy mandray mpitsoa-ponenana ny firenena malagasy ary tsy misy teratany syrianina eto.
Misava ny mpitandro filaminana
Rehefa nanontaniana ny momba ireo olona mahabe resaka eto an-dRenivohitra ny zandary, nilaza fa efa nanao ny fidinana ifotony nanao ny fanaraha-maso saingy tsy nahita ny fisiana mpitsoa-ponenana eto an-drenivohitra na amin’ny manodidina ny renivohitra ihany koa aza. “Manao ny fisavana sy ny fanaraha-maso ny teratany vahiny ny mpitandro filaminana raha misy ny mampiahiahy. Savaina ny pasipaoro sy ny “visa” ka raha tsy misy ireo, ampahalalana ny tonian’ny mpampanoa lalàna ary izy indray manome baiko momba ireo olona voakasika avy eo”, hoy ny avy amin’ny seraseran’ny zandary. Nanamafy ny zandary fa efa misy ny fisafoana sy ny fanaraha-maso.
Nitovy amin’izay ihany koa ny fanazavana avy amin’ny polisy rehefa nanontany ny tompon’andraikitra fa misy ny fisafoana sy ny fisavana ary tsy voamarina ny fisian’ny mpitsoa-ponenana na teratany vahiny mampiahiahy eto, araka ny voalazan’ny olona. Manamarina hatrany ny mpitandro filaminana ary efa asany isan’andro izany.
Na izany na tsy izany, mila fanazavana mazava avy amin’ny tompon’andraikitra momba ireo olona ireo ny olona. Iza ireo miendrika Karana, pakistaney mahabe resaka anaty tambajotra ka hatrany anaty fiaraha-monina ireo? Resaka miely mantsy mety hivadika tsaho ary hitera-doza ho an’ireo teratany vahiny ireo. Ny olona efa mora taitaitra rahateo.
Une réponse à "Pakistaney, syrianina,… ? : teratany vahiny mampiahiahy"
Ramahazomanana 15/11/2017 à 23:42
Mazava be izao, ireo ilay mpitsaomponenana avy any syrie, izay neken’ny fanjakana ny fidirany teto Madagasikara, ny Pakistany eto Madagasikara fia mahay teny gasy be tahaka antsika Malagasy mihitsy ary ireo tsy mahay mihitsy, izany hoe ireo le izy ary tena horaharaha be ny hanalana an’ireo eto, ary mbola hande hatrany @ faritra ireo hitrandraka ny harena ambany tany koa de izay vao holoza ny hoavintsika Malagasy rehetra.